EBelarus: Ama-Russian mercenaries avotela icebo `` lokwesabisa ''! - ITELE RELAY
I-Belarus: Ucwaningo lwama-Russian mercenaries ngesakhiwo se "terror"!
I-Belarus ivula uphenyo lobugebengu "ngezenzo zobushokobezi" ezihlelelwe amasosha aseRussia aboshwe ngaphambi kokhetho lukamongameli.
I-Belarus ivule uphenyo lobugebengu "ngezenzo zobuphekula" ezihlelwe yi Ama-Russianenenaries waboshwa ngaphambi kokhetho lukamongameli, wengeza ngokuthi ubelandela abanye abaningi.
Abezokuphepha kuleli ngoLwesithathu babophe iqembu lababhikishi baseRussia abangu-32 nenye indoda kwenye indawo.
Inhloko yomkhandlu wezokuphepha eBelarus, u-Andrei Ravkov, uthe ngoLwesine kuphenywe ubugebengu nokuthi amadoda asolwa ngokulwa "nezenzo zobushokobezi".
“Bangamashumi amathathu nantathu ababoshwa; bangu-200 noma ngaphezulu endaweni (yaseBelarus), ”kusho uRavkov.
Uthe "kuyaqhubeka ukusesha" ukuthola laba abanye, bekhononda ngokuthi "kufana nokuthungatha izinaliti endaweni eshisiwe".
Abezokuphepha bakwa-KGB eBelarus bathi la madoda aboshwa ayengamalungu eWagner Group, inkampani yezempi ezizimele okukholakala ukuthi ilawulwa umfelandawonye kaMongameli waseRussia uVladimir Putin futhi evikela izintshisekelo zikaMoscow e-Ukraine, Syria nase eLibya.
Lokhu kuboshwa kuza ngaphambi kokhetho lukamengameli lwango-Agasti 9 lapho u-Alexander Lukashenko onamandla azosebenza ihlandla lesithupha.
ULukashenko wabopha abamele amaqembu aphikisayo nabasekeli babo.
Imibhikisho yaqubuka ezweni lonke labantu abayizigidi eziyi-9,5, kwathi uSvlana Tikhanovskaya oneminyaka engu-37 ubudala, waba yisishoshovu sezepolitiki.
ULukashenko wasola abanye babahlaseli bakhe ngokuthi balawulwa "yizingane" eMoscow.
URavkov ukhulume ngemuva komhlangano nabamelene noLukashenko, kubandakanya noTikhanovskaya, wabaxwayisa ngokuthi kuzoqiniswa izindlela zokuphepha kule mihlangano.
Kamuva, abaphethe izindaba zikahulumeni iBelta News Agency babika ukuthi abaphathi baseBelarus bakholelwa ukuthi umyeni kaTikhanouskaya kungenzeka abophe iqembu leRussia futhi bamethulele amacala obugebengu ngezinsolo zokudala udlame.
UBelta uthe phambilini ukuthi abaphethe babethole imininingwane ngokufika kwabahlaseli abangu-200 eBelarus "bezosibambezela isimo ngesikhathi somkhankaso wokhetho".
Emhlanganweni ophuthumayo womkhandlu wakhe wezokuphepha ngoLwesithathu, uLukashenko wafuna incazelo evela eMoscow.
"Uma benecala, kubalulekile ukuphuma kulesi simo ngesithunzi," kusho uLukashenko esitatimendeni sethelevishini.
Inxusa laseRussia eBelarus Dmitry Mezentsev uthe ngoLwesine bamenyelwe eMnyangweni Wezangaphandle WaseBelarus ngalolo suku ekuseni ukudingida leli cala, kusho abezindaba baseRussia.
Umkhulumeli waseKremlin uDmitry Peskov uthe iMoscow ifune incazelo ephelele evela eBelarus ngabantu baseRussia ababoshiwe futhi banethemba lokuthi amalungelo abo azohlonishwa ngokuphelele.
"Asinayo imininingwane ngezinto ezingekho emthethweni ezenziwa yizo," kusho uPalmkov eMoscow. “Siyethemba ukuthola imininingwane ezosenza sikwazi ukuxazulula le nkinga. "
UDevkov uthe kunamadoda amaningi aseBelarusian anencazelo efanayo naseRussia, kodwa iMoscow ayizange icabange ukuthi kukhona abakwenzayo okungekho emthethweni.
Futhi ngoLwesine, iBelarus ne-Ukraine zivumile ukuqinisa ukulawulwa kwemingcele nokwandisa ukubambisana komngcele kulandela ukuboshwa, kusho uMnyango Wezangaphandle waseBelarus.
Lesi sinyathelo sihlose ukuvikela noma yimuphi umzamo wokudicilela phansi amandla la mazwe amabili, kusho abe-Belarusian esitatimendeni, kulandela umhlangano no I-Mezentsev kanye neNxusa Lase-Ukraine Elingamelayo eBelarus.
Umthombo: https: //www.aljazeera.com/news/2020/07/belarus-probes-russian-mercenaries-terror-plot-200730092717064.html
ISwitzerland: Amacala obugebengu avulelwe umphathi weFIFA u-Infantino
I-KLM imemezele ukusakazwa okusha okuyi-1500 ukuletha ukusikeka komsebenzi ku-20%